I-17 yasimahla ye-CPD ekwi-Intanethi yaBafundi ngo-2022
I-17 yasimahla ye-CPD ekwi-Intanethi yaBafundi
Esi sithuba siqulathe uluhlu oluhlanganisiweyo lwe-CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala kunye neenkcukacha zabo, ukunceda ootitshala kunye nabancedisi bokufundisa bathathe ikhondo labo lomsebenzi baye kwinqanaba elilandelayo ngokuba ziingcali.
Okokuqala, i-CPD imele uPhuculo loQeqesho oluQhubekayo, kwaye nakuwuphi na umsebenzi onceda umntu ukuba aphuhlise ulwazi kunye nezakhono zakhe, kwaye akhuthaze ukuziqhelanisa kwabo nobuchule, kodwa kule meko, ngootitshala.
Ngoku, usebenzisa inkcazo engentla, i-CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala, zikho iikhosi zasimahla ezikwi-intanethi eziyilelwe ukuphuhlisa okanye ukupholisha ulwazi kunye nezakhono zabo bakumsebenzi wokufundisa kwaye babenze babe ziingcali.
Kwinkqubo yokufundisa, ootitshala kufuneka baqhubeke nokuphucula izakhono zabo, baphonononge izimvo zokufundisa ezintsha, iindlela kunye nokufumana ulwazi oluninzi. Kufuneka iqhubeke ngolu hlobo kubafundisi-ntsapho - kuba uluntu kufuneka luqhubeke luguquka kwaye oko kwenzeka ngenxalenye yeengcamango ootitshala ababelana ngazo nabafundi babo.
Yiyo le nto eyenza ukuba umsebenzi wokufundisa ube ngumsebenzi otyhafisayo, kuba kuya kufuneka uqhubeke uhlaziya, uhlaziya, ukuba ngcono, kunye nobungcali ngakumbi. Akukho siphelo kuyo kodwa kukuphucula uluntu, uluntu kunye nehlabathi ngokubanzi.
Ukuba ngutitshala oqeqeshiweyo kufuna ixesha elininzi kunye nokuzinikezela njengoko uza kube ufunda uluhlu olupheleleyo lwezakhono, ubuchule bokufundisa, kunye nezifundo oza kuzisebenzisa xa ufundisa eklasini. Isenokubangela uxinzelelo kancinci ukuya kwezi klasi zokufundisa ngobuchule kwaye uphathe iiklasi zakho.
Enkosi ekufundeni kwi-Intanethi ukuba le ngxaki isusiwe, akufuneki uye kwiklasi yobuso ngobuso ukuze ufunde iikhosi zobungcali kwikhondo lomsebenzi wobutitshala. Endaweni yoko, ufuna i-PC okanye ithebhulethi kunye nonxibelelwano lwe-Intanethi ukuze ubhalise kwizifundo zobuchwephesha kwi-Intanethi kwaye uzixhobise ngesakhono esifanelekileyo.
Kule nqaku, sichaze i-CPD yasimahla kwi-Intanethi yootitshala nganye yeenkcukacha zabo, kunye neekhonkco zesicelo sokuba ubhalise.
Kuzo zonke izibonelelo zemfundo ekwi-Intanethi, ezo ndikhetha zona ngakumbi kukuguquguquka kunye neekhosi ezingabizi / zasimahla. Imfundo ekwi-Intanethi ikuvumela ukuba ufunde naphina, ngesantya sakho kwaye zininzi iikhosi ezikwi-intanethi ezisimahla ezibonelela ngezakhono ezifunekayo.
Kuyamangalisa ngenene, awufumani xinzelelo okanye uchithe imali ekufumaneni isakhono osithandayo okanye isakhono esifunwa yimodeli yeshishini yangoku.
I-CPD yasimahla ekwi-Intanethi yootitshala yenye yazo kwaye akukho mfuneko yokuba uhlawule nantoni na, ngaphandle kwexesha lakho kunye nokuzibophelela, ukufumana ezi zakhono zobuchule bokufundisa.
Zithini izifundo zeCPD?
Ukuqhubekeka nezifundo zoPhuculo lobuGcisa (CPD) ziikhosi ezilungiselelwe ngokukodwa ukuqeqesha okanye ukuphuhlisa abantu ukuba babe ziingcali kwicandelo labo lezifundo, umzekelo, ootitshala.
Ngaba iikhosi zeCPD zisimahla?
Zininzi iikhosi ze-CPD onokuzifumana kwi-intanethi simahla, ekuvumela ukuba usebenzise amandla e-intanethi kunye nezibonelelo zokufunda kwi-Intanethi. Kweli nqaku, siza kudwelisa ezinye zeekhosi zasimahla ze-CPD ezikwi-Intanethi zootitshala.
Ngaba abaqeshi bayayamkela i-CPD?
Andiqinisekanga ukuba ngaba abaqeshi baya kuyamkela i-CPD?
Ewe impendulo nguEwe. Ewe, abaqeshi bayaziqonda izatifikethi ze-CPD ezifunyenwe kwinkonzo ye-CPD eyamkelweyo. Nge-CPD eqhotyoshelwe kwi-CV yakho okanye Phinda uqalise ngokuzenzekelayo phambi kokhuphiswano ongenayo nayiphi na imibutho.
Unokufumana indima ephezulu kakhulu okanye isikhundla kumbutho okanye ukuba sele uqeshiwe apho, unokufumana ukunyuselwa.
Zingaphi iiyure ze-CPD ezifunekayo ootitshala?
Ootitshala mabagqibe ubuncinci iiyure ezingama-30 ze-CPD ngonyaka.
Ootitshala bawafumana njani amanqaku e-CPD?
Ootitshala bafumana iiyunithi zeentengo zemboleko xa bethatha inxaxheba kwiinkqubo ze-CPD ezivela kwi-PRB yophuhliso lobungcali. Ezi nkqubo zibandakanya; iisemina, iindibano zocweyo, ukhenketho notyelelo, izifundo zoqeqesho ezingezozidanga kunye neentlanganiso zenzululwazi, iimodyuli, izifundo zobugcisa, kunye neentlanganiso zezihloko.
Ezi nkqubo ze-CPD zinokuthatha naluphi na uhlobo lokufunda okanye ukuthatha inxaxheba, njengokufunda kwi-Intanethi, amava omsebenzi wobungcali, ukufunda ngokwakho, ukufunda ngokusesikweni, ukufunda ngokungekho sikweni kunye nokufunda okungaqhelekanga.
Ngoku, xa le mibuzo icacisiwe kwaye kucace gca, ngoku siya phambili kumxholo ophambili; I-CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala.
I-CPD yasimahla ekwi-Intanethi yaBafundi
Ukuxhatshazwa Ezikolweni: Bamele Baphendule Njani Ootitshala?
Ubudlelwane bobuchwephesha nabantu abancinci
Ukuhamba, Yiba seMpilweni
Thatha ukufundisa kwakho kwi-Intanethi
Ukuqhagamshela ukuFunda kweKharityhulamu kunye neMisebenzi ye-STEM
Ukulawula indlela yokuziphatha ekufundeni
Ukuqonda ulwimi: Ukufunda kunye nokufundisa
Izakhono eziBalulekileyo zeDijithali
Ubukrelekrele bemvakalelo emsebenzini
Ukufundisa aBafundi abaphethwe zizifo eziXhalabisayo
Utitshala okwi-Intanethi: Abantu kunye nePedagogy
Kutheni Ufundisa Ubugcisa?
Intshayelelo kuKhuseleko lwe-cyber kootitshala
Ukuqonda iiNkqubo zeKhompyuter
Iziseko zokuFundisa ukuFunda: Ukuphuhlisa ubudlelwane
IDiploma kwi-Psychology yezemfundo
I-CPD yasimahla ekwi-Intanethi yaBancedisi boTitshala
Ukuxhasa ukuFunda okuPhumeleleyo kwiSikolo sasePrayimari
Ukuxhasa ukuFunda okuPhumeleleyo kwiSekondari
Abancedisi bokufundisa: INkxaso kwiZenzo
Nazi i-17 zasimahla ze-Intanethi ze-CPD zootitshala, iikhosi eziphambili, kunye neenkcukacha zabo kunye nokunxibelelana ukubhalisela iiklasi zokufumana amanqaku kunye nokuba ngumnini weCPD owaziwayo.
Le yikhosi yeyure enye kunye ne-CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala ebaxhobisa ngeendlela zokuvavanya nezokuthenjwa zokujongana nokuxhaphaza kwigumbi labo lokufundela nasesikolweni ngokubanzi. Uya kuba nokuqonda ukuxhatshazwa kunye nendlela yokuchonga, uthethathethane ngoncedo xa umntwana exela ukuxhatshazwa, kwaye ube nakho ukutolika iindlela ezahlukeneyo zokujonga abantu ngokuxhatshazwa.
Qala ikhosi yasimahla
Kwimeko yemfundo, ukuphuhlisa uhlobo olufanelekileyo lobudlelwane bobuchwephesha- olulungileyo- nabantu abancinci lunempembelelo enkulu kwiziphumo zabo zokufunda. Olu hlobo lobudlelwane lunokunika abantu abancinci iindlela ezintsha zokusondela, zokuphuhlisa, kunye nokulawula ubudlelwane obuphezulu babo.
Kule CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala, uya kuphonononga iindlela ngeendlela zokwakha ubudlelwane obunokuthi busebenze ngeendlela ezinokuthi zazise umsebenzi nabantu abancinci.
Le yi-CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala egubungela izibonelelo zezempilo zemisebenzi yomzimba efana nokuzilolonga kunye nokuzibandakanya kwenye imfundo yezempilo, kunye nokubaluleka kokutya.
Bexhotyiswe ngolu lwazi, ootitshala banokuqhubeka nokuluhambisa kubafundi babo, babafundise izibonelelo zokwenza umthambo kunye nendlela yokuthintela umngcipheko wezifo ezinjengesifo seswekile, kwaye ubakhuthaze ukuba bayithathele ingqalelo impilo yabo yomzimba.
Ukufunda oku sele uyazi ukuba kukhulu kangakanani ukufunda kwi-Intanethi kwaye kuncede kangakanani abafundi kwihlabathi liphela, ngakumbi ngexesha lobhubhane weCovid-19 apho abantu abaninzi kufuneka bafumane izidanga zabo kwi-Intanethi kwaye bade baphumelele kwi-Intanethi.
Ukubaluleka kokufunda kwi-Intanethi kubhetyebhetye kwaye wonke utitshala kufuneka abe yingcali ekumiseni nasekusebenzeni ngokufanelekileyo.
Le CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala enokugqitywa kwisikhokelo sosuku kootitshala ngamanyathelo asebenzayo okuhambisa amava okuzibandakanya, angenamthungo, kunye namava okufundisa kwi-Intanethi kubafundi.
Njengotitshala, kubalulekile ukuba uphuhlise izifiso zabafundi bakho kwaye ngale khosi, uya kuba nakho ukunceda abafundi abanomdla kwi-STEM (isayensi, itekhnoloji, ubunjineli, okanye imathematics) ngokwandisa indima yakho njengo-STEM utitshala wesifundo ngokudibanisa ikharityhulam yokufunda kwimisebenzi.
Le yenye ye-CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala kwaye ekugqibeleni kwayo, uya kuba nakho ukubonelela ukuqonda okwenyani kwesifundo sakho kunye nokubaluleka kwaso kwikhondo lomsebenzi elizayo.
Ngale CPD yasimahla ye-Intanethi yootitshala, uya kuphonononga indlela izakhono zokuziphatha ezinokukunceda ngayo kunye nabafundi bakho kunye nendlela yokulawula iimpendulo zakho zovakalelo xa unxibelelana kwigumbi lokufundela.
Le nkqubo iya kukuxhobisa ngezakhono kunye nobuchule bokulawula ngokufanelekileyo igumbi lakho lokufundela, uqaphele indlela yokuziphatha kwabafundi, kwaye uphuhlise ukuthembela kwigumbi lokufundela.
Le CPD yasimahla ekwi-Intanethi yootitshala inikezelwa yiDyunivesithi yaseSouthampton kunye neBhunga laseBritane emva koko ihanjiswe kwi-Intanethi ngeFutureLearn. Le khosi yazisa ootitshala kwezinye iikhonsepthi eziphambili zokufundisa ngempumelelo nokufunda iilwimi.
Indlela yakutshanje yeyedijithali, yonke into ngoku ikwi-Intanethi kwaye iyaqhubeka ikhula kwaye ayikhangeleki ngathi iza kuqhuma kwiminyaka ezayo. Kule CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala, uya kuthatha inxaxheba eklasini eya kuthi ikunike izakhono ezibalulekileyo zedijithali onokuzidlulisela kubafundi bakho.
Abafundi kufuneka baqale ukubandakanyeka kwihlabathi ledijithali besebancinci kuba yile nto baya kuba nayo ixesha elide, elide kwaye ootitshala babo kufuneka babaxhobise ngezakhono ngendlela eyiyo.
Uyazilungiselela kwaye uye emsebenzini (wesikolo) njengotitshala apho udibana nabanye abasebenzi (ootitshala nabanye abasebenzi) kwaye iimvakalelo zakho emsebenzini ngokuqinisekileyo zahlukile ekhaya.
Kule CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala, uya kuphonononga intsingiselo yobukrelekrele bemvakalelo, ukubaluleka kwayo, kunye nendlela yokuphuhlisa izakhono zakho zobukrelekrele bemvakalelo. Ngokuqonda ubukrelekrele bemvakalelo, uya kubona ukuba iphucula njani ukusebenza emsebenzini kunye nokwakha ubudlelwane obungcono.
Unxunguphalo yinto yokwenene kwaye ichaphazela ukukhula ngokwasemzimbeni, ngokweemvakalelo nangokwasentlalweni kwabantwana nakwishumi elivisayo. Ukunciphisa ingozi, kufuneka ootitshala baphendule ngokufanelekileyo besebenzisa iinkqubo kunye nemigaqo-nkqubo enolwazi ngokwenzakala.
Ngale CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala, uyakuqonda ukuba yintoni umothuko onzima, ifuthe lawo ekusebenzeni komfundi, kunye nendlela yokuziqhelanisa nemigaqo-nkqubo kunye nemigaqo-nkqubo yokunciphisa umngcipheko kubafundi.
Ukufunda nge-Intanethi kuya kusiba luncedo kwaye phantse zonke izikolo (eziziisekondari nezasemva kwesekondari) zisebenzisa izinto ezintsha ukwenza iinkqubo zokufunda. Njengotitshala, kuya kufuneka uphucule amava akho okufundisa kwi-Intanethi, ukuze ube nakho ukuyila iikhosi ezibandakanyayo ukuhlangabezana neemfuno zabo bonke abafundi abahlukeneyo, kwaye ubumbe ubunjani bakho bedijithali.
Uziphumeza njani zonke ezi zinto?
I-peasy elula. Bhalisa kule CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala kwaye ufumane izakhono kunye nokuqonda imfundiso ye-Intanethi kwaye uzomeleze ngokomsebenzi.
Njengotitshala, kuya kufuneka uqonde iimfuno zabafundi abahlukeneyo kwaye kule CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala, uya kuphonononga imiceli mngeni abajamelana nayo abafundi abakhubazekileyo abanokusebenzisa iikhompyuter ngeendlela ezahlukeneyo xa besenza inxaxheba ekufundeni kwi-Intanethi.
Le khosi ye-intanethi iya kuxhobisa ootitshala ngetekhnoloji kunye neendlela ezisetyenziswa ngabafundi abakhubazekileyo, uhlengahlengiso kwiindlela zokufundisa, kunye nezigqibo zoyilo ezichaphazela ukufikeleleka kwezixhobo zokufunda kwi-Intanethi.
Kutheni ufundisa ubugcisa? Buyintoni ubugcisa kubugcisa kwikharityhulam yesikolo?
Le mibuzo kunye nokunye kuyaphendulwa kule CPD yasimahla ye-intanethi yootitshala apho uza kube ujonga izibonelelo zokubandakanya ubugcisa kwikharityhulamu yesikolo kunye nezinye zezigxeko eziqhelekileyo.
Le yikhosi yasimahla ekwi-intanethi yootitshala ehanjiswa kwi-Intanethi yiKamvaLearn kwaye yenzelwe ootitshala. Ukuxhobisa ngemixholo ephambili yolwazi lokhuselo lwe-cyber ukufundisa abafundi abaneminyaka eli-14-16 ubudala.
Ukufundisa abantwana kule khosi kuya kubanceda bafunde ukuhlala bekhuselekile ngelixa besebenzisa itekhnoloji, uhlaselo olwahlukeneyo lwe-cyber kunye nendlela yokubathintela, kunye nokuphonononga i-malware, i-bots ezinobungozi kunye nesoyikiso sedatha ebonakalayo.
Mhlawumbi ufunda le phepha ngenqaku, kulungile ukuba awukho, omnye umntu, oko kukuthi, iikhompyuter ziphantse kuwo onke amakhaya, izikolo, iiofisi, njl. tech kunye nabafundi kufuneka babe nolwazi lwekhompyuter ngokunjalo.
Kule CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala, Ukuqonda iiNkqubo zeKhompyuter, uya kujonga ukuba isebenza njani ikhompyuter, kwenzeka ntoni ngaphakathi, kunye nesoftware kunye nemiba yehardware. Ngolu lwazi, emva koko ungabanika abafundi kwaye uncede uqalise ikhondo lomsebenzi onomdla kwikhompyuter.
Ikhosi, iZiseko zokuFundisa ukuFunda: Ukuphuhlisa ubudlelwane, yenye ye-CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala abahanjiswa nge-Intanethi ngeCursera.
Le khosi yenzelwe abo sele befundisa okanye benqwenela ukuba ngootitshala nakweyiphi na imeko kunye nemeko kwaye bafaka izakhono zokufundisa ezikumgangatho ophezulu, ubungcali, kunye novavanyo kubo ukuze babe ngootitshala abaqeqeshiweyo.
Ukuqonda isayikholoji yemfundo kuya kukunceda usebenze ngcono kwigumbi lokufundela njengotitshala, uya kuba nakho ukuqonda abafundi bakho ngokulula kodwa kuya kufuneka uzuze ubuchule.
Uyenza njani lonto?
Ngokubhalisa kule nkqubo unokufumana ulwazi lwenzululwazi yezemfundo eya kuthi incede ekuphuculeni iindlela zakho zokufundisa, zokufundisa kunye noqeqesho phakathi kwabafundi.
Le yi-CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala kwaye ungabhalisa kangangoko ufuna, akufani nokuba unento oza kuyiphulukana nayo, bakhululekile, kwaye kwakhona, kokukhona iiklasi uzibandakanya kwaye ugqibezela ulwazi ngakumbi kunye nezakhono onazo kwaye ukuba nobungcali ngakumbi koogxa.
Abancedisi bootitshala ukuba bangashiywa ngaphandle, silungiselele i-CPD yasimahla yokunceda abancedisi ukuba babhalise kwaye bafumane ulwazi lobungcali.
Oku kulandelayo zii-3 ze-CPD ezikwi-Intanethi ezisimahla kwi-intanethi zokuncedisa:
Ukuxhasa abantwana kwisikolo saseprayimari kubalulekile kwaye kule khosi, ukhulisa ukuqonda kwakho ngokufunda nokufundisa ukuze ufumane ukuzithemba ekuxhaseni abantwana esikolweni njengomncedisi wokufundisa.
Le CPD yasimahla ekwi-Intanethi yokuncedisa ekufundiseni inikezelwa yiYunivesithi yokuFunda kwaye ihanjiswe kwi-Intanethi yiKamvaLearn, efuna kuphela iiveki ezi-4 kunye neeyure ezi-3 zokufunda veki nganye.
Oku phantse kufana nale khosi ingentla kodwa ngeli xesha uza kube ufunda kwaye ufundisa ngendlela yokuxhasa abafundi bezikolo eziziisekondari. Ikwabonelelwa yile yunivesithi inye kunye neqonga lokufunda kwi-Intanethi.
Le CPD yasimahla ekwi-Intanethi yokuncedisa ekufundiseni inikezelwa yiYunivesithi evulekileyo kwaye ihanjiswe ngeqonga layo lokufunda kwi-Intanethi, i-OpenLearn. Ikhosi ekwi-Intanethi yenzelwe ukukwakha ube ngumncedisi wokufundisa onobuchule onokuthi usebenze ngokukuko nabantwana nolutsha kuzo zonke iinkalo zobomi.
Qalisa iikhosi zasimahla
Ngelishwa, azikho zininzi zale CPD yasimahla kwi-Intanethi yokuncedisa ekufundiseni, kodwa ezi zintathu kufuneka zikunikeze kakuhle kwaye zikuxhobise ngezakhono ukuze ube ngumncedisi onesakhono sokufundisa.
I-CPD yasimahla ekwi-intanethi yootitshala
Post Previous:I-11 yeeSayensi zoNyango eziGqwesileyo eCanada zaBafundi beZizwe
Okulandelayo Post:Izikolo ezingama-50 + zokwenza izihlangu kwilizwe jikelele kwi-Intanethi nakwi-Intanethi
zama Inkonzo yokubhala izincoko nguWritix ukufumana uncedo lobuchwephesha.